कसरी टाट पल्टियो नेपाल एयरलाइन्स ? - बडिमालिका खबर
काठमाडौं — नेपाल वायुसेवा निगमसँग करिब ५४ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ। ठान्नुहोला, आहा ! कति धनी रहेछ। तर, यसलाई बेच्नु हो भने गोजीमा कति बच्ला ? जम्मा ७ अर्ब। किनभने, यसको दायित्व भार (तिर्नुपर्ने) नै ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। २०७५/०७६ मा गरिएको निगमको विस्तृत मूल्यांकन लेखापरीक्षणको तथ्यांकले गरिमामय राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कहालीलाग्दो चित्र देखाउँछ।
यस्तै, २०५५ सालमा जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज–एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरिएको थियो। त्यो प्रकरणमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोरेको थियो। २०५५ मा नै बिना टेण्डर चाइना साउथवेष्ट एअरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो। यो प्रकरणमा निगमले २२ करोड नोक्सानी व्यहोर्‍यो। २०५७ मा विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग सम्झौता भएको थियो। संसद्को हिउँदे अधिवेशन पूरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई २ अर्ब नोक्सान व्यहोराएको थियो।
विसं २०१९ मा बनेको ऐनलाई संशोधन गर्दै २ खर्बको अधिकृत पुँजी सहितको कम्पनी बनाउन पनि उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि अर्थसचिवको अध्यक्षतामा बसेकोे बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाउन महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल लगायतलाई समिति बनाएर जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो। उक्त समितिले कार्यरत कर्मचारीहरूसँग छलफल नै नगरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीसम्बन्धी मस्यौदा पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू करिब २ महिनादेखि आन्दोलनरत छन्।
निजी वायुसेवाले आफ्नै प्रयासमा नै उडान बढिगरेको हुँदा यसमा सरकारको कुनै चलखेल नभएको बताउँछन्। उडाउनयोग्य विमान नभएर पनि निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कटौती भएको उनको तर्क छ। आकाशमा उड्नुपर्ने जहाज विमानस्थलमा थन्किएको देख्दा नै निगमको व्यवस्थापकीय क्षमता देखिन्छ। २ महिनादेखि कर्मचारी आनदोलनरत हुँदा नत सरकारले केही बोलेको छ न त निगम व्यवस्थापनले नै। निगमलाई धरासयी बनाएर निजी जहाज कम्पनीलाई सुम्पिनका लागि नै नयाँ प्रबन्धपत्र र नियमावली ल्याउने चलखेल भएको कांग्रेस निकट युनियनका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुुर पुन बताउँछन्। व्यवस्थापनले काम गर्न सकने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा व्यापार योजनासहित छलफल गर्न आउन भनि महाप्रबन्धक पौडेल भन्छन्। उड्न सक्ने जहाज उडेका नै छन् भन्ने उनको पनि तर्क छ।
अन्नपुर्ण पाेष्टबाट शाभार